”Kulamada horyaalka Talyaaniga qaarkood dibedda hallugu dheelo” – Galliani – Gool FM
”Kulamada horyaalka Talyaaniga qaarkood dibedda hallugu dheelo” – Galliani
Raage December 22, 2016
(Dooxa) 22 Dis 2016 – Adriano Galliani ayaa rumaysan in “qaar ka mid ah kulamada Serie A in dibedda lagusoo ciyaaro mustaqbalka dhow”.
Guddoonka AC Milan ayaa haatan Dooxa u jooga kulanka Supercoppa Italiana, kaasoo ay Jimcaha ciyaari doonaan Juventus vs AC Milan, wuxuuse soo jeediyay in ciyaaraha horyaalka Talyaaniga qaarkood dibedda lagusoo dheelo.
“Waloow aysan ciyaaraha Talyaanigu haatan ahayn kuwa dunida ugu wanaagsan, misna weli wuu jiraa dhadhankii Talyaanigu,” ayuu Galliani ku yiri Mediaset.
“Waa inaan dadka is barnaa [mar kale] waana inaan ciyaaraha qaar dibedda kusoo dheelnaaa, waxaa intaa dheer in sanadka soo aaddan marka aannu la xaajoonayno TV-yada soo duwa ciyaareheenna inaannu dalbanno in la xafido tebinta ciyaaraha (encryption).
“Haddii aad ciyaaraha ka iibiso dal Shiinaha oo kale ah, waad soo banbaxaysaa lkn haddii aad baaqyo (codes) ku xirato waa arrin kale. Muuqashadu waa muhim.”
“Waxaan doonaynaa inaan Talyaaniga markale dunida keenno, dal ka dal, annagoo ka fikirayna qofka aan ka iibinayno, annagoon kaliya lacag eegaynine muuqasho eegayna.” ayuu raaciyay.
Dallada Milan iibsanaysa oo ogolaatay qandaraaska Bonaventura balse diiddey....